Uzo oma asaa nke Semax I Kwesịrị Knowmara Tupu Jiri Ya - Phcoker
Isi uru asaa nke Semax I Kwesịrị Knowmara Tupu Jiri
N'aka nke ọzọ, enwerekwa ihe nchọpụta ahụike zuru ezu edepụtara banyere etu ọgwụ a ga - esi nyere aka n'ibelata nchekasị yana melite ọnọdụ onye ọrụ. A na-eji Semax dị ka nootropic ọkọlọtọ, mana ọ nwekwara ojiji ndị ọzọ dịka ịkwalite ahụike ụbụrụ na ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịnweta uru Semax naanị mgbe ejiri ọgwụ ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Otú ọ dị, jide n'aka na ị nweta nduzi ojiji site na dọkịta gị maka nsonaazụ na ahụmịhe kacha mma.
Semax (80714-61-0) bụ ọgwụ peptide nke mepụtara na Russia na 1980s iji nyere aka n'ịgwọ na ịchịkwa nsogbu ndị dị ka ọrịa strok. Taa, a na-edepụta nchegbu Semax na ndepụta nke ọgwụ ndị dị mkpa na Russia mgbe ha gosipụtara ịdị irè n'ịgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche.
Ndị dọkịta na-ekwukwa Semax dị ka ọgwụ nootropic mgbe ha ghọtara na ọ nwekwara ike rụọ ọrụ dị oke mkpa iji melite arụmọrụ ncheta ma belata nrụgide. Ọ bụ ezie na Russia na Ukraine kwadoro ị theụ ọgwụ a, mba ndị ọzọ dịka United States of America ka ga-anabata ya n'agbanyeghị na ha dị oke mkpa n'ịgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche. Agbanyeghị, nke ahụ anaghị egbochi gị iji ntụ ntụ Semax.
Ewezuga ọkọlọtọ Semax ntụ ntụ, enwerekwa ụzọ abụọ dị na ahịa, mana ọ fọrọ nke nta ka ha rụọ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ha gụnyere Na-Semax-Amidate na N-Acetyl. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ọmụmụ sara mbara nke emegoro ma ọ bụ edere banyere ụdị abụọ Semax ahụ. Agbanyeghị, site na nyocha nke Semax, ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ na Na-Semax-Amidate nwere ike ime ka elekwasị anya na-elekwasị anya ebe N-Acetyl Semax na-agbanyekwu ume. Nsonaazụ Semax nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ, dabere na otu ahụ si emeghachi omume na usoro onunu ogwu. Are nweere onwe gị ịnwale ụdị nsụgharị Semax mana ijide n'aka na ị gụnyere dọkịta gị na usoro usoro onunu ogwu niile.
The Semax ntụ ntụ dị na ntanetị dị iche iche na ụlọ ahịa anụ ahụ gbara gị gburugburu ebe ị nwere ike ịtụ ahịa gị oge ọ bụla. Nweta Semax maka ire ere n'aka onye ahịa ma ọ bụ onye na-ebubata ya nwere ntụkwasị obi ma nwee ọhụụ. Ọ bụghị ndị na-ere ọgwụ ọ bụla na-eweta ngwaahịa dị mma, ọ dịkwa mma mgbe niile ịmụ ndị na-eweta Semax tupu ị nye iwu gị. Ghọta otu ụlọ ahịa si arụ ọrụ yana ogologo oge ọ ga-ewe tupu ị nweta Semax gị (80714-61-0).
Ọ dịkwa mma ịga maka nlekọta ahụike tupu ịmalite ị drugụ ọgwụ a. Semax maka ọrịre bụ ọgwụ ọgwụ edenyere ọgwụ, ya mere, dọkịta gị kwesịrị ịbụ onye ziri ezi iji dozie usoro ọgwụgwọ ziri ezi maka gị mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Usoro ọgwụgwọ a dịkwa mkpa ka onye ọrụ ahụike ahụike nyochaa maka nsonaazụ kacha mma.
Mgbe ịzụrụ Semax (80714-61-0), dobe ya ka ụmụaka rute na ngwa nju oyi ebe ọ nwere ike wedata dịka peptides ndị ọzọ. Maka mma, ahụmịhe Semax, hụ na ị na-agbaso ntuziaka usoro ọgwụgwọ niile. Adịghị edozi usoro onunu ogwu na-enweghị ịgwa dọkịta gị.
Dịka e kwuru na mbụ, Semax peptide abụrụla ihe dị mkpa na ụwa ahụike, ọkachasị n'ịgwọ ọnọdụ dị iche iche. Na Russia, a kwadoro ọgwụ ahụ mgbe ha ghọtara na ọ nwere ike inye aka ịchịkwa nsogbu mgbasa dị ka ọrịa strok. Agbanyeghị, ọmụmụ ihe Semax emere kemgbe ọtụtụ afọ ekpughewokwa ọrịa ndị ọzọ ọgwụ ahụ nwere ike ịgwọta nke ọma.
Mba dị iche iche ma ọ bụ ndị dọkịta na-eji Semax agwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche. A na-etinye ụjọ Semax na intranasally, mana naanị tụlee dị iche dabere n'ọnọdụ ahụike dị n'okpuru ọgwụgwọ. Enwekwara ụdị Semax injectable nke naanị ndị ọkachamara ahụike ga-elekọta. Na-echeta mgbe niile ịchekwa ọgwụ ahụ na ngwa nju oyi.
BDNF na-arụ ọrụ dị mkpa na nhụjuanya akwara ozi, mmepe ọgụgụ isi, na plastik nke synapses. Ọnọdụ BDNF dị ala nwere ike ibute ma ọ bụ ọbụlagodi ịda mbà na nchekasị. Dị ka ọ na-ekpughe gị na mmetụta dị ntakịrị, Semax egosipụtakwala na ọ bụ ezigbo BDFN nkwalite na antidepressant. Ọgwụ ahụ nwere ike melite mmepụta BDNF zụta ruo 800%.
ng mgbaàmà ndị metụtara ADH, nchegbu, na ịda mba. Mmụba nke ihe ndị a niile na-eme ka mkpali dị elu, si otú a na-eme ka mgbado na nrụpụta.
Neurotransmitters dị ka enkephalins nwere mmetụta na nghọta, ma mgbe ịba ụba, ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịmepụta ncheta na nhazi ọnọdụ. Emere nnyocha banyere ọgwụ na Russia, na ndị ọrụ nwere ezi ahụike, Semax ntụ ntụ mee ka uche ha dịkwuo mma na njigide ebe nchekwa. Mmụta sayensị na-egosi na ịkwalite mgbasa ọbara kwesịrị ekwesị na nchedo oxidative na ụbụrụ mmadụ na-eme ka ncheta dịkwuo elu.
A na-ekwukwa na mmụba nke BDNF na hippocampus dị oke mkpa iji melite ncheta n'ihi na hippocampus bụ ebe ụbụrụ na-enwe mmetụta uche na ncheta. N'aka nke ọzọ, BDNF na-enyekwa aka n'ime ka ncheta, ncheta na ikike ịmụ ihe na idowe ozi ọhụrụ. BDNF na-akpali mmepụta nke Neurogenesis, nke bụ ọgbọ nke ụzọ irighiri akwara na ụbụrụ nke na-enyere aka melite ọrụ ụbụrụ na nhazi.
Sayensị, BDNF bụ protein na-akwalite ahụike ụbụrụ zuru oke site na ichebe na iwusi sel ụbụrụ gị ike, na-akwalite mkpụrụ ndụ ụbụrụ, na ịkwalite ụbụrụ zuru oke nke ụbụrụ. Na-emekarị, nootropic ọ bụla nke na - eme ka ọkwa BDNF dị elu na - eme ka cognition nwee ọtụtụ ihe ọfụma, Semax egosila na ọ bụ ihe atụ zuru oke nke mgbakwunye ike BDNF.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eji nchịkọta Semax mee ka ọnọdụ dịkwuo elu na ọgwụ na-atọ ụtọ. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-emekwa ka ọrụ dopamine na serotonin dị na ahụ gị, nke bụ ndị na-ahụ maka ntanetị na-enwe mmetụta dị ukwuu na nchekasị na ịda mba. Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị dibịa ọgwụ anọgidewo na-achọpụta ọnọdụ ahụike dị iche iche nke Semax nwere ike ịgwọ.
Usoro ọgwụgwọ Semax na-adabere na ọnọdụ ahụ ike dị n'okpuru ọgwụgwọ, ọ ga-abụkwara ọkachamara ọkachamara n'ịgwọ ọgwụ ahụ. Ndị a tụrụ aro Usoro ọgwụgwọ Semax sitere na 300mcg ruo 600mcg. Agbanyeghị, a na-adụ ndị ọrụ ọhụụ ume ka ha malite site na iji ọgwụ dị ala, nke dọkịta nwere ike idozi ya ka emesịrị mgbe ị nyochachara azịza ahụ gị na ọgwụ ahụ.
N'iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ dịghị onye kwesịrị itinye ihe ize ndụ dị elu maka ịmalite ebe ọ nwere ike ibute nsonaazụ siri ike. Iji zere ihe ize ndụ ọ bụla metụtara ọgwụ a dịka Semax ntutu isi ọ bụ ihe dị mma mgbe niile ịga maka nyocha ahụike tupu ị takingụ ọgwụ a maka ihe ọ bụla.
A na-ewerekarị Semax na intranasally, ị ga-ewere 2 ma ọ bụ 3 ntakịrị tụlee n'ime oghere imi ọ bụla ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ kwa ụbọchị maka okirikiri nke dọkịta gị setịpụrụ. Ọnọdụ ụfọdụ dịka mgbe ị na-ewere Semax maka oge mgbake mgbe ị gwọchara ọgwụ, ị ga-ewere 4 tụlee na imi ọ bụla, ugboro isii kwa ụbọchị. Maka ncheta narcosis ma ọ bụ nsogbu ntị, usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro bụ 3 tụlee na imi nke ọ bụla ugboro atọ n'ụbọchị. Semax maka ịda mbà 2 ruo 3 na-adaba na ọ bụla imi, ugboro atọ n'ụbọchị bụ ọgwụ a tụrụ aro.
Dị ka Isi iyi Semax na-enye ụzọ dị mma maka usoro ọgwụgwọ nke imi, na-ejide n'aka na ị ga-enweta ọgwụ ahụ site na dọkịta gị. Ọnọdụ dị iche iche na-akpọ usoro onunu ogwu dị iche iche. Nyocha ahụike ga-eduzi ọgwụ gị na ịtọzi usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka gị. Usoro onunu Semax kwesiri ibu n'etiti 300mcg rue 600mcg.
Enwere ike belata usoro onyonyo ahụ dabere n'otú ahụ gị si emeghachi ọgwụ mgbochi Semax nke mbụ ọbụlagodi gbagoro. Ọ bụrụ na ị maghị banyere ịgbanye onwe gị, ịnwere ike ịrịọ dọkịta gị ka ọ zụọ gị ma ọ bụ dozie oge nleta oge niile iji were usoro ọgwụgwọ gị. Elegharala ịgbanye onwe gị ma ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eme ya n'ihi na ọ nwere ike ibute nsogbu ahụike ndị ọzọ.
Ogwu ogwu a egosiputala na ogwu ogwu di iche iche n’aru mmadu, ihe n’ile ihe nlere anya nile enweghi ezi nsogbu nke Semax. Nke ahụ mere Semax otu n'ime nootropic kachasị nchebe na ahịa taa. Na Russia, Semax bara uru na ọgwụgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche dịka isi ọwụwa, ọrịa strok, na ọrịa uche.
Somefọdụ ndị na-arụ ọrụ Semax kọọrọ ụfọdụ obere nsogbu Semax dị ka ọnụ akọrọ, ịbawanye ụba, ọgbụgbọ, na ụra. Semax na ọnwụ ntutu bụkwa mmetụta ọzọ dị n'akụkụ ụfọdụ ndị ọrụ Semax kwuru. Mmetụta mmetụta ndị a niile adịkarịghị akọ, mana medics nwere ike ijikwa ha. Ahụ mmadụ dị iche, ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu Semax ọ bụla na-adịghị mma na-agwa dọkịta gị ozugbo maka enyemaka.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ịtụle ịkwado Semax na Phenylpiracetam n'ihi ike mgbagha nke enwere ike ibute site n'iji ọgwụ a na-akpali akpali. Phenylpiracetam bụ ezigbo ihe cognition na-akwalite nootropic mana ọ na-eme nwayọ. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị ọrụ ekwuola na ị nweta uru Semax dị mkpa mgbe ha jikọtara ya na ndị ọzọ na-akpali akpali dị ka curcumin nke na-enye ohere ịgbatị ike na-aga n'ihu n'ime ahụ.
Ọgwụ abụọ ahụ dị iche iche karịa ka esi eji ha agwọ ọrịa dị iche iche. Semax dịwanye ike iji meziwanye cognition na ịda mbà n'obi, ebe Selank na-ewepụta nsonaazụ ọma mgbe ejiri ya dị ka mgbochi nchegbu. Otú ọ dị, ọgwụ abụọ ahụ na-eme ka ọkwa BDNF dị elu, mgbe ụfọdụkwa ha nwere ike ijikọ ọnụ, dịka e kwuru na mbụ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara Semax na Selank gakwuru onye ọkachamara ahụike.
Ọ bụrụ na ịnọ na Russia, a na-ere Semax n'okpuru ndenye ọgwụ dọkịta. Otú ọ dị, na United States of America, a naghị achịkwa ọgwụ ọjọọ ahụ, ọ bụ ezie na FDA akwadoghị ya. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịnweta ya site na ụlọ ahịa nootropic n'ịntanetị. Anyị na-adụ ndị ọrụ Semax ọdụ mgbe niile ka ha kpachara anya ma were oge ha iji nweta ndị ahịa Semax kacha mma. Mee nyocha gị, lelee nyocha ndị ahịa iji ghọta otú ndị na-ere ahịa Semax si arụ ọrụ tupu ị nye iwu gị. Cheta, ọ bụghị ndị ahịa Semax ọ bụla ị hụrụ n’ahịa ka a ga-atụkwasị obi.
Ozi ọma ahụ bụ na anyị bụ ndị isi na-eweta ndị ahịa Semax na mpaghara ahụ. Nwere ike ịme iwu gị na weebụsaịtị anyị ma hụ na ịnata ngwaahịa gị n'oge kachasị dị mkpirikpi. Semax maka ọrịre na nchịkọta Semax niile dị na ụlọ ahịa na ntanetị anyị.
Anyị bụ nlekọta Ndị na-eweta ntụ ntụ Semax, ya mere, anyị na-adọ ndị niile anyị ji kpọrọ ihe aka na ntị ka ha ghara ị takingụ ọgwụ anyị na-enweghị nyocha ahụike ma ọ bụ tinye aka na ọkachamara ahụike na usoro usoro ọgwụgwọ niile. Nakwa, gwa dọkịta gị ozugbo ị nwere mmetụta ọ bụla dị egwu.
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). Semax na-egbochi ọnwụ nke tyrosine hydroxylase-positive neurons na ọdịbendị agwakọta nejeljal na-enweta site na embryonic rat mesencephalon na ihe atụ nke 6-hydroxydopamine-emetụta neurotoxicity. Journal Neurochemical, 9(4), 295-298.
Koroleva, SV, & Myasoedov, NF (2018). Semax dị ka ọgwụ zuru ụwa ọnụ maka ọgwụgwọ na nyocha. Bulletin Bayoloji, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, & Miasoedov, NF (2010). Mmetụta Nootropic na analgesic nke Semax na-eso ụzọ nchịkwa dị iche iche. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, Mee). Semax na-edozi nrụrụ ụbụrụ nke ụbụrụ na-ebute site na iwebata prenatal nke valproic acid. Na Doklady Biological Sciences (Mpịakọta nke 450, nke 1, peeji nke 126). Scienceer & Media Media.